Kwụsị Hzobe Njirimara Kachasị Mkpa nke Ntanetị Weebụ gị | Martech Zone
Tọzdee, Nọvemba 15, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọtụtụ mgbe, mgbe m gara na websaịtị nke ụlọ ọrụ, ihe mbụ m na-achọ bụ blog ha. Kpọrọ. Anaghị m eme ya n'ihi na m dere akwụkwọ na ụlọ ọrụ ịde blọgụ, M na-achọ n'ezie ịghọta ụlọ ọrụ ha na ndị nọ n'azụ ya.
Mana anaghị m ahụkarị blog. Ma ọ bụ blog dị na ngalaba dị iche kpamkpam. Ma ọ bụ na ọ bụ otu njikọ site n'ụlọ ha na peeji nke, nanị mara dị ka blog.
O yikarịrị ka ndị gị ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ gị kachasị itinye ego na talent ahụ bụ otu n'ime akụ gị kachasị mkpa mgbe ị na-ere. Gịnị mere i ji ezo talent ahụ? Otherlọ ọrụ ndị ọzọ nwere ike i copyomi ngwaahịa gị, atụmatụ gị yana uru gị… mana ha enweghị ike i copyomi ndị gị. Ndị gị bụ otu nnukwu ihe dị iche na ụlọ ọrụ gị.
Jiri ihe ntanetị ọhụrụ gị yi uwe elu gị! Tinye foto ma ọ bụ njikọ nke ndị edemede nke blọọgụ gị. Ọbụghị naanị na ibipụta ndepụta blọọgụ gị na ibe gị ọ bụla na-eme ka njikarịcha nke ibe ndị ahụ ka mma site na ịnye ọdịnaya dị ọhụrụ, nke bara uru… ọ na-enyekwa ndị ọbịa ohere ịmara ndị nọ n'azụ akara gị.
Ọ bụghị naanị na blog, ma. Inwe akara ngosi Twitter na Facebook dị mma… mana ibipụta twitter iyi gị na ntinye Facebook ama ama Facebook Fans bụ ihe na-adọrọ adọrọ karị. Ndị mmadụ na-azụta n'aka ndị mmadụ - yabụ gịnị kpatara ị jiri zoo akụkụ kachasị mkpa nke ntanetị gị?
Zọ ụfọdụ iji tinye ndị mmadụ na saịtị gị:
Ibe otu - gụnyere otu ibe dị egwu. Ọ bụrụ n’ị nwekwara ike ịgụnye ozi blọọgụ ha kachasị ọhụrụ, ọ ka mma!
Ngwa wijetị - gụnye ederede kachasị ọhụrụ na blọọgụ gị na saịtị gị. Gbalịa ịgụnye onyonyo onye dere ya ma ọ bụ onyonyo esere na post nke ya.
Ngwaọrụ Facebook - Facebook nwere ọtụtụ elekọta mmadụ plugins ndị ahụ dị egwu maka iweta obodo Facebook gị na saịtị gị na nke ọzọ.
Ngwaọrụ Twitter - weta mkparịta ụka mkparịta ụka Twitter gị na saịtị weebụ gị!
Kwusa mkparịta ụka a na saịtị gị na-egosi ndị na-ege gị ntị na ị kwadebere nke ọma banye na mkparịta ụka bara uru na atụmanya gị ma ọ bụ ndị ahịa gị. Nke a bụ ihe nwere ike ọ gaghị ihu na etiti na weebụsaịtị gị, mana nke ahụ ga-adị mfe ịchọta ma soro.
Tags: blogndepụta blogblog ebipụtawijetị facebookndị mmadụndị na-eren'irewijetị twitter